Daawo:Wasiirad Anisa Maxay xilkeedee ku wayday???????
Home /Blog/Daawo:Wasiirad Anisa Maxay xilkeedee ku wayday???????
Wasiiradii hore ee Arimahq Haweenka ee Pubtland Anisa Haaji Muumin Waxaa dad badan is weydiinayaan sababta aanan ugu jirin Wasiirada cusub, Walaalayaal sababtu waa hal qodob oo ah meeshii la iga rabay in aan qabiilkayga u shaqeeyo, ayaan u shaqeeyay dhamaan dadweynaha reer Puntland.
Waxaan idiin sheegaya qofka markuu kitaab maro , ma’ahan inuu illoowo kitaabka iyo dhaartii uu maray ee uu xasuusto xilka uu hayo, waayo xilkan waa magac wuuna baa ba’aa, Laakiin Kitaabka aad martay waa axdi iyo ballan gaar ah oo aad illaahay la gelayso. Kan bani’aadanka aad la gelayso waa qiimeynaysaa , kan illaahay aad la gelaysona ma qiimeyn kartid taasna waa mid adiga kugu soo noqonaysa!
Xildhibaanada noocaas ahna, wadankana uma shaqeyn karaan sharafna uma soo hoynkaraan Puntland, sababto ah Puntland waa dad isku xiran , waa dad usoo dhabar jabay dantooda, waxayna istaahilaan in lagu qiimeeyo wanaagooda, waxay istaahilaan in daacadnimadooda loogu shaqeeyo, waxayna istaahilaan in aqoon iyo karti lagu soo kordhiyo laguna dhiirigeliyo in howshii ay ummada u wadeen ay hore u wadaan, ee maahan ummada u shaqeynaysa intii dhabarka laga jebiyo in la hor istaago horumarkii ummada gaari lahayd
Waxaan kusoo geba gebeynaya isku duubnaada saa shalay ii garab taagneydeen fadlan wasaarada Haweenka u garab istaaga, Fadlan shaqadii ka dhabeeya, Fadlan ha noqonina dadkii kufay ee kici waayey, ee inta kacdaan is garab qabsada oo hore u socda”
War Deg deg ah:- 11 ka mid ah Wasiirada Maamulka Hirshabeelle ayaa hadda Xilka iska Casiley
Madaxwaynihii hore Puntland Dr Faroole oo gaaray Kismaayo